Tencent Holdings Limited - Wikipedia
Shirkadda Tencent Holdings Limited
Shirkadda Tencent Holdings Limited (Shiinaha: Tengin Shiinaha) oo ah shirkad shiineys ah oo ka kooban shirkado shiineys oo Shiinaha ah, kuwaas oo ku takhasusay adeegyo internet oo kala duwan iyo waxyaabaha, madadaalada, sirdoonka iyo teknolojiga labadaba Shiinaha iyo caalamka.  Tencent Seafront Towers (oo sidoo kale loo yaqaano Tencent Binhai Mansion) waxay ku taallaa Degmada Nanshan, Shenzhen. Tencent waa shirkad maalgashi ee ugu weyn aduunka, mid ka mid ah shirkadaha Internetka iyo tiknoolajiyada ugu weyn, mid ka mid ah shirkadaha waaweyn ee maal-gashadayda, iyo cayaaraha ugu weyn uguna qiimaha badan (Tencent Games) iyo shirkadda warbaahinta bulshada. Adeegyadeeda badan waxaa ka mid ah shabakadaha bulshada, muusikada, shabakadaha webka, e-commerce, ciyaaraha mobile, adeegyada internetka, nidaamyada lacag bixinta, casriga, iyo ciyaaraha internetka oo badan, kuwaas oo dhammaantood ka mid ah kuwa adduunka ugu weyn uguna guuleysta qaybahooda. Bixinta Shiinaha waxaa ka mid ah wargeyska degdegga ah ee Tencent QQ iyo mid ka mid ah macaamiisha webka ugu weyn, QQ.com.  WeChat ayaa ka caawisay xoojinta fiditaanka Tencent ee adeega casriga ah, waxaana lagu calaamadiyay mid ka mid ah barnaamijyada ugu awoodda badan adduunka.  Waxa kale oo ay leedahay inta badan adeegyada adeegga muusikada ee China (Tencent Music Entertainment), iyada oo in ka badan 700 milyan oo isticmaalayaal ah iyo 120 milyan oo macaamiisha bixiya, adduunka ugu weyn uguna faa'iido badan.
Laga bilaabo Jannaayo 2018, shirkaddu waxay leedahay suuq qiimihiisu yahay $ 580 bilyan oo doollar (HK $ 4.48 trillion), waana shirkadda ugu qiimaha badan Asia, iyada oo koritaanka dakhliga ee sii socota, saldhigga weyn ee dadka isticmaala iyo maalgashiga meelaha cusub. Waxay kor u qaadday qiimeynta iibsashada aadka u sareysa ee 98% oo ka soo jeeda garoomada diyaaradaha, oo lagu calaamadeeyay aragtidooda daa'im ah.  Waa shirkaddii ugu horeysay ee Aasiya ah ee soo saarta US $ 500 bilyan qiimaheeda, iyada oo ay ka sarreysay qiimaha suuqa Facebook 20kii Nofeembar 2017, waxana uu noqday shirkadda ugu qiimaha badan bulshada ee dunida. Tencent waxaa loo aqoonsaday mid ka mid ah shirkadaha ugu caansan adduunka ee ay ka mid yihiin warbaahinta iyo shirkadaha kala duwan, oo ay ku jiraan kooxda Boston Consulting. Ilaa 2018, Tencent waxay leedahay qiimaha ugu qiimaha adduunka 5aad ee ugu sarreeya
Tencent waxay maamushaa boqolaal ka mid ah xayawaannada iyo iskaashatooyinka ku jira warshado iyo goobo badan, iyagoo abuuraya bandhiga ballaaran ee hantida iyo maalgashiga ee ganacsiyada kala duwan oo ay ka mid yihiin e-ganacsiga, tafaariiqda, ciyaaraha fiidiyowga, hantida maguurtada, software, xaqiiqda ficilka, , adeegyada maaliyadeed, fintech, teknoolajiyada macaamiisha,
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Tencent_Holdings_Limited&oldid=190648"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 6 Febraayo 2019, marka ee eheed 12:37.